Iprojekthi yeNdlala enkulu-iBhanki yokutya yaseGalveston County
Ubusuku bomlingo boBugcisa
Iprojekthi enkulu yendlala
Iqela lezeMfundo ngeZondlo lisebenzisana neSebe elijongene nokuSondeza ukuThintela ukuHanjiswa kwaMakhaya ukuze kuqinisekiswe ukuba abantu abadala (abaneminyaka engama-60 nangaphezulu) abagodukayo banokufumana ukutya okuhanjiswa ekhaya okuhlangabezana neemfuno zabo zempilo. Ulwazi malunga nezidlo luyafumaneka kwiimfuno ezithile zempilo ezingapheliyo, kubandakanya isifo seswekile, isifo sentliziyo, isifo sezintso ezingapheliyo kunye nezifo ze-GI. Iibhokisi ezilungiselelwe ngokwamayeza ziyafumaneka qho ngenyanga kwaye zisiwe liqela elizinikeleyo lamavolontiya ngqo kwiminyango yabathengi. Abahlali abadala bavakalise umbulelo wabo ngemveliso entsha eyongeziweyo ehamba nebhokisi yokutya okungonakaliyo, kunye noncwadi olufundisa ngesondlo.
Ngenkxaso-mali evela kwi-Feeding America ye-Multi-Donor Senior Hunger Grant ukujongana nendlala ephezulu kwindawo esihlala kuyo sidibanisa ukutya okufanelekileyo kwezamayeza ukujongana neemfuno zesondlo kunye nezempilo zabantu abadala, sandise imveliso entsha kubantu abadala abaphuma emakhaya, kunye nokubonelela ngemfundo yesondlo. Oku kunokujonga iindlela ezahlukeneyo ukusuka ekunikezelweni, kwiiresiphi, ukupheka, ukupheka imiboniso, kunye nezinye izinto. Sikwandisile nentsebenziswano yethu esempilweni yokujongana neemfuno zabantu abadala abaya kwiindawo zokutya kwindawo yethu.
Ngale projekthi sikwazile ukufaka isandla kuphando ukuze ukondla iMelika kungafunda ngakumbi malunga nokunqongophala kokutya kwabantu abadala.
Ezinye zeenjongo zethu zibandakanya:
Ukuseka amaqabane ama-5 asempilweni
Ukwandisa kakhulu inani labantu abadala abakhonzwayo
Ukunceda iiarhente ezintathu ezitsha ukuba zisebenze ngcono kubantu abadala
Ukufezekisa imfundo yesondlo kulo lonke ulwabiwo oluphezulu lokutya
Unomdla wokuzithandela? Ukubona ukuba unganceda njani kule projekthi, nxibelelana amera @galvestoncountyfoodbank.org